Usoro na Ọnọdụ | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Ndị na-esonụ na-akọwa Usoro nke Ọnọdụ Ọrụ Maka mkpokọta Blog Traffic m.
Biko G RER D AKW THISKWỌ A NTARKWU NT BTA NTORETA BU ACBỌTA MA Ọ B US N'USLỌ ANYBS. Site n'inweta ma ọ bụ jiri weebụsaịtị anyị, ị kwenyere ka iwu na ụkpụrụ ga-emechi n'okpuru. Ọ B IFR YOU NA YOU B WGH TO TOBỌR TO NA IWU NA Usoro ndị a, YOU B NOTGH AC ACBATA ma ọ bụ jiri weebụsaịtị anyị. Ọ BR YOU NA DO GHAGHAND TBỌD AND NA NT THEKWU NDSE A, EJI EJI EBE EBE. ANY WE nwere ike igosipụta nkwekọrịta a n'oge ọ bụla na-enweghị onye ọ bụla, NA-AKWICEKWỌ AKW TOKWỌ KWES YOUR YOU KWES SUR, KWESCHR,, NA SUB MODR EF AHECT ND EF A GA-EME NT PKWU N'OFLỌ N'OSTLỌ N'OFLỌ AKA. YOU KWES TOR TO Nyochaa nkwekọrịta niile ka ị mara ụdị ngosipụta ndị a na ị ga-aga n'ihu ma ọ bụ jiri nke weebụsaịtị anyị mgbe a gụsịrị akwụkwọ a, ọ ga-abụrịrị na nkwenye gị kwenyesiri ike nke nkwenye, gụnyere ihe niile, na ihe ọ bụla.
ANYBS NA-EBE A NA-AH WE AKWBSKWỌ ND AND NA-EME NA 'AS AS' NA-ENWEGHR akwụkwọ ikike ọ bụla. ANYBS Weebụsaịtị na ndị na-enye ya, KWESTRT KWESTR BY KWES BYR BY KWES BYR BY KWES DISR, KWES ,R, KWES ALLR ALL KWES ALLR ALL ỌD, KWES (R, KWES BR (KWES INR (KWES (R (KWES (R (KWES (R (KWES (R, KWES ,R, KWESIRR, KWESIRRIR KWESIRRIR KWURU. ANYBS Weebụsaịtị na ndị na-enye ya enweghị akwụkwọ ikike gbasara nkenke, ntụkwasị obi, mmezu, ma ọ bụ oge oge nke ọdịnaya, ọrụ, ederede SOFTWARE, EGO, NA EGO.
Site n'iji webụsaịtị a, ịnwere irube isi na usoro ọrụ yana ọnọdụ ọnọdụ ojiji. Biko gụọ ha nke ọma.
Ebe nrụọrụ weebụ My Traffic Blog (yana weebụsaịtị ndị ọzọ "dị n'ime" na-esite na ya, dị ka saịtị ndị otu ama ama ma ọ bụ webpages dị mkpa na weebụsaịtị ma ọ bụ weblog) bụ ọrụ ozi ịntanetị (yana, oge, na-anọghị n'ịntanetị) ma dabere na nnabata gị usoro na ọnọdụ ndị edepụtara n’okpuru (akụkụ niile na ndị ọzọ niile akpọrọ webụsaịtị anyị).
Iwu ọ bụla, ọkwa, ma ọ bụ akwụkwọ iwu / nchịkwa ndị ọzọ dị na weebụsaịtị anyị abanyela na Usoro Ọrụ na Ọnọdụ ojiji. Nke a nwere ike ịgụnye, na-enweghị njedebe, Iwu DMCA, amụma nzuzo, Nkwuputa, Nkwupụta nwebisiinka, Iwu Anti-Spam, na Nkwenye FTC Amụma.
Agree kwenyere irubere iwu na iwu niile metụtara maka ojiji nke weebụsaịtị Weebụsaịtị My Traffic na ọdịnaya yana ihe enyere na ya.
Weebụsaịtị anyị bụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya, nke naanị ya enweghị mmekọrịta, njikọ, ma ọ bụ njikọ ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla, mmadụ, uwe, nzukọ, ma ọ bụ otu akpọrọ ebe a, ọbụlagodi na aha dị otu a pụtara na aha webụsaịtị anyị, ngalaba, URL, ma ọ bụ ma ọ bụghị. Ikwesighi iche na ndi ozo, site n'ikwu aha ha, kwadoro ihe obula ichotara ebe a. Ebumnuche bụ inye ndị na - agụ akwụkwọ anyị ihe bara uru, ụfọdụ enwere ike ịkwụ ụgwọ ụfọdụ maka ha. Kwesịrị ịdị na-eche oge niile na a na-akwụ anyị ụgwọ, na agbanyeghị nke ahụ nwere ike ọ gaghị akpali anyị ka anyị na-atụ aro na-adịghị mma, ị ga-aza ajụjụ maka mkpebi ego gị mgbe niile, ma ọ bụ itinye ego, ịzụta, inye onyinye, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
1. Nwebisiinka, ikike na ntinye echiche / njirimara.
Nkwupụta ndị a na-akọwa Nkwupụta nwebisiinka maka weebụsaịtị anyị
Eji iwu ọgụgụ isi chebe ọdịnaya niile nke weebụsaịtị anyị, gụnyere iwu mba nwebisiinka na ụghalaahịa. Onye nwe nwe nwebiisinka na / ma ọ bụ ụghalaahia bụ weebụsaịtị anyị, yana / ma ọ bụ ndị ọzọ nyere ikikere ma ọ bụ ihe ndị ọzọ metụtara ya.
Nweghị ikikere nke edemede ọ bụla, akwụkwọ, ebook, dọkụmentị, post blọọgụ, sọftụwia, ngwa, mgbakwunye, ngwa mgbakwunye, nka, eserese, eserese, foto, vidiyo, webinar, ndekọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ elere ma ọ bụ gere na ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ My Traffic Blog ma ọ bụ site na email ma ọ bụ site n'ụzọ echekwara ọdịnaya na saịtị ndị otu. Debe data na weebụsaịtị anyị, dị ka okwu blog, anaghị agbanwe eziokwu a ma ghara inye gị ikike ọ bụla na data ahụ. Nyefere ikike ọ bụla na ọdịnaya gị ozugbo ọ ghọrọ akụkụ nke weebụsaịtị anyị.
B NOTGH MOD MODB ,GH C, COPY, RUPU, WUPUTA, UPLOAD, POST, TRANSMIT, MA Ọ B D NA-EKPUTA, NA Ọ BYLA, THELỌ AKW CONKWỌ NA ONBITRUR ANY,, G TEKWUO AKW ,KWỌ, GRAFIC, CODE NA / OR SOFTWARE. Ga-ejigide ikike nwebisiinka niile na ọkwa ikikere ndị ọzọ dị na ọdịnaya mbụ na akwụkwọ ọ bụla i mere nke ọdịnaya. Gaghị ere ma ọ bụ gbanwee ọdịnaya ma ọ bụ mepụtagharị, gosipụta, mee n'ihu ọha, kesaa, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ jiri ọdịnaya ahụ n'ụzọ ọ bụla maka nzube ọ bụla ma ọ bụ nke azụmahịa. A machibidoro iji ọdịnaya akwụ ụgwọ na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ na gburugburu kọmputa netwọkụ maka nzube ọ bụla. Ọ bụrụ n ’imebi usoro ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla, ikikere gị iji ọdịnaya ahụ na-akwụsị ozugbo na ị ga-emerịrị nnomi ọ bụla i mere nke ọdịnaya ahụ ozugbo.
Enyere gị ikike a na-agaghị ahụ anya, nke a na-agaghị ebugharị, nke nwere ike iji webụsaịtị anyị naanị maka ihe nzuzo, nke onwe, na nke azụmahịa. Nwere ike ibipụta ma budata akụkụ ụfọdụ site na mpaghara dị iche iche nke weebụsaịtị naanị maka ojiji gị na-abụghị nke azụmahịa, ọ bụrụhaala na ị kwenyere ka ị ghara ịgbanwe ọdịnaya site na nke mbụ ya. Ọzọkwa, ị kwenyere na ị gaghị ehichapụ ma ọ bụ hichapụ ikike nwebisiinka ọ bụla ma ọ bụ nke nwere ikikere site na ihe ndị ị bipụtara ma ọ bụ budata. Rịba ama na ọkwa ọ bụla na akụkụ ọ bụla nke weebụsaịtị anyị nke na-egbochi ibipụta & nbudata na-adapụta nkwupụta na njikwa niile.
Dịka onye ọrụ, ị kwenyere iji ngwaahịa na ọrụ ndị webụsaịtị anyị na-enye n'ụzọ kwekọrọ na iwu na ụkpụrụ niile metụtara mpaghara, steeti na gọọmentị etiti. Enweghị ihe ọ bụla a ga-echekwa ma ọ bụ nyefee nke na-emebi ma ọ bụ na-emebi ikike nke ndị ọzọ, nke bụ iwu na-akwadoghị, okwu rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, nke na-adịghị mma ma ọ bụ nke ọzọ, na-eyi egwu, na-ekwutọ mmadụ, ma ọ bụ na-emebi ikike nzuzo ma ọ bụ nke mgbasa ozi.
Ebe nrụọrụ weebụ m na-ahụ maka okporo ụzọ na-amachibido omume nwere ike ịbụ mmebi iwu, na-enye mbuli obodo ma ọ bụ na-emebi iwu ọ bụla. A machibidoro ọrụ ọ bụla na-egbochi ma ọ bụ na-egbochi ndị ọrụ ọ bụla site na iji ọrụ nke weebụsaịtị anyị. Ewezuga nkwekọrịta edere ede, ị gaghị eziga ma ọ bụ zipu mgbasa ozi ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ azụmahịa na weebụsaịtị anyị.
I kwenyere inye webụsaịtị anyị ihe na-abụghị sọọsọ, akwụghị ụgwọ alaeze, zuru ụwa ọnụ, enweghị ike ịgbagha agbagha, ikike ebighi ebi, yana ikike ikikere, iji mụta, kesaa, kesaa, mepụta ọrụ ndị ọzọ, gosipụta ma gosipụta n'ihu ọha ihe ọ bụla. na ozi ndị ọzọ (gụnyere, na-enweghị njedebe, echiche ndị dị na ya maka ngwaahịa na ọrụ ọhụụ ma ọ bụ nke ka mma) ị nyefere mpaghara ọ bụla nke weebụsaịtị anyị (dị ka bọọdụ mkpọsa, ọgbakọ, blog, na ndị otu akụkọ) ma ọ bụ site na e-mail na weebụsaịtị anyị n'ụzọ ọ bụla na mgbasa ozi ọ bụla ugbu a mara ma ọ bụ nke a mepụtara. Also na-enyekwa weebụsaịtị anyị ikike iji aha gị n'ihe metụtara ihe ndị edobere na ozi ndị ọzọ yana n'ihe metụtara mgbasa ozi, ahịa na ihe nkwado niile metụtara ya. Kwenyere na ị gaghị enweta ihe ọ bụla megide ebe nrụọrụ weebụ anyị maka ebubo ọ bụla ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ mmejọ nke ikike ọ bụla na nkwukọrịta anyị na weebụsaịtị anyị.
Akwụkwọ, ngwaahịa, ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ akpọtụrụ ebe a ma ọ bụ na weebụsaịtị anyị bụ ụghalaahia edenyere ma ọ bụ ọrụ aka ọrụ nke weebụsaịtị My Traffic Blog ma ọ bụ ndị ọzọ metụtara ya. Ngwaahịa ndị ọzọ na aha ụlọ ọrụ ndị akpọrọ na weebụsaịtị anyị nwere ike ịbụ ụghalaahịa nke ndị nwe ha.
Njikọ na weebụsaịtị anyị
Nwere ike ịnye njikọ na weebụsaịtị anyị, ọ bụrụhaala na ị gbanweghị, wepu, ma ọ bụ kpuchie ikike nwebisiinka ma ọ bụ ọkwa ndị ọzọ na weebụsaịtị anyị. Ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ihe njikọ ndị ọzọ agaghị etinye aka na omume iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nke na-akpali agụụ mmekọahụ. N'ikpeazụ, ị nwere ike ijikọ ọ bụrụhaala na ị ghọtara na ị ga-akwụsị ijikọ weebụsaịtị anyị ozugbo anyị weghaara weebụsaịtị anyị.
2. Ojiji webụsaịtị anyị.
I kwenyere, kweta, ma kwenye na anyị abụghị ndị ọkachamara zụrụ azụ na anyị ebughị ịkọ inye ndụmọdụ ọkachamara ma ọ bụ ọkachamara na mpaghara ọ bụla.
Data dị na ma ọ bụ nyere site na weebụsaịtị weebụsaịtị My Traffic Blog abụghị ka ọ bụrụ, ọ meghị, ndụmọdụ gbasara iwu. Weebụsaịtị anyị, na iji ya eme ihe, anaghị emepụta mmekọrịta onye ọka iwu na ndị ahịa. Anyị anaghị enye ikike ma ọ bụ na-ekwe nkwa ido anya, ma ọ bụ icheta data dị na ma ọ bụ jikọọ weebụsaịtị anyị.
Ebumnuche nke data dị na ma ọ bụ nke ewepụtara site na webụsaịtị anyị abụghị ka ọ bụrụ, ma ọ bụghị, ndụmọdụ ahụike ma ọ bụ ahụike. Weebụsaịtị anyị, na iji ya eme ihe, anaghị emepụta mmekọrịta onye dibịa-ọrịa. Anyị anaghị enye ikike ma ọ bụ na-ekwe nkwa izi ezi, ma ọ bụ icheta data nke dị na ma ọ bụ jikọọ na weebụsaịtị anyị.
Ebumnuche nke data dị na ma ọ bụ nke ewepụtara site na webụsaịtị anyị abụghị ka ọ bụrụ nke anaghị eme ka ndụmọdụ gbasara ego / itinye ego na ego. Ebe nrụọrụ weebụ anyị, na ojiji gị, anaghị emepụta mmekọrịta onye ndụmọdụ na onye ahịa. Anyị anaghị enye ikike ma ọ bụ na-ekwe nkwa izi ezi, ma ọ bụ icheta data nke dị na ma ọ bụ jikọọ na weebụsaịtị anyị.
Gị iji nke m My Traffic Blog website ma ọ bụ ihe jikọrọ anyị na ebe nrụọrụ weebụ bụ kpam kpam na gị onwe gị n'ihe ize ndụ. Ikwesighi ime ihe ma obu dabere na data obula na webụsaịtị anyị, ebe ọdabara, na-achọghị ndụmọdụ nke onye ọka iwu tozuru oke nyere ikikere iji rụọ ọrụ na ikike gị maka okwu ikpe gị. Ikwesighi ime ihe ma obu dabere na data obula na webụsaịtị anyị, ebe ọdabara, na-achọghị ndụmọdụ nke dibia ruru eru nyere ikikere iji aka gị rụọ ọrụ maka nsogbu ahụike gị. Ikwesighi ime ma ọ bụ dabere na data ọ bụla na weebụsaịtị anyị, ebe ọdabara, na-achọghị ndụmọdụ nke onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego nwere ikike iji aka gị rụọ ọrụ maka mkpa gị na nsogbu gị.
Anyị nwere ike ịgbanwe na njirimara, ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya nke weebụsaịtị anyị n'oge ọ bụla. Anyị debere ikike anyị naanị n'uche iji dezie ma ọ bụ hichapụ data ọ bụla pụtara na weebụsaịtị anyị.
Ọrụ Gị Dịịrị Ndị Ọrụ Ndị Ọzọ
Ojiji nke weebụsaịtị anyi bu maka uru nke gi, nke na ereghi ahia. Ọ dịghị ụzọ ị ga - esi tinye webusaiti anyị n'ụzọ na - egwuputa ihe ọmụma nke onwe gị na ndị ọzọ, ma ọ bụ na nkwupụta blog ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, maka ojiji nke gị ma ọ bụ maka uru ndị ọzọ. Nke a gụnyere, mana ọnweghị oke, spam (email azụmaahịa na-akwadoghị).
Ọ bụrụ n’inwetaghị ozi banyere ndị ọrụ ndị ọzọ n'amaghị ama, ị gaghị eso onye ọzọ kerịta nke a.
Amachibidoro ụfọdụ mpaghara nke weebụsaịtị My Traffic Blog. Anyị debere ikike igbochi ohere ịbanye na mpaghara ndị ọzọ nke weebụsaịtị anyị, ma ọ bụ weebụsaịtị anyị niile, ka anyị si chọọ.
Ọ bụrụ na anyị nye gị NJ onye ọrụ (aha njirimara) na paswọọdụ iji nyere gị aka ịnweta mpaghara amachibidoro nke weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ, ị ga-ahụrịrị na ID na paswọọdụ onye ọrụ ahụ bụ ihe nzuzo. Maynweghị ike ịkekọrịta njirimara onye ọrụ gị na / ma ọ bụ paswọọdụ gị na onye ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla, ma ọ bụ ozugbo ma ọ bụ na-enweghị isi. You na-anabata ibu ọrụ maka mmemme niile mere n'okpuru ID onye ọrụ ma ọ bụ paswọọdụ gị.
Anyị nwere ike iwepu njirimara gị na paswọọdụ gị naanị ma ọ bụrụ na ị mebie iwu ọ bụla ma ọ bụ usoro na-achịkwa ojiji nke weebụsaịtị Weebụsaịtị My Traffic ma ọ bụ ọrụ nkwekọrịta ọ bụla ị ji anyị.
Ngwaahịa / Ọrụ nke atọ
Understand ghọtara na, ewezuga ozi, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ akọwapụtara nke ọma dị ka websaịtị anyị na-eweta, weebụsaịtị anyị anaghị arụ ọrụ, na-achịkwa ma ọ bụ na-akwado ozi ọ bụla, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ịntanetị n'ụzọ ọ bụla. Ewezuga ozi nke weebụsaịtị anyị gosipụtara dị ka nke a, ozi niile, ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye site na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ na generallyntanetị n'ozuzu ha na-enye ndị ọzọ na-anaghị esonye weebụsaịtị anyị, enwere ike ịkwụ anyị ụgwọ.
Also ghọtakwara na weebụsaịtị Weebụsaịtị My Traffic enweghị ike ma ọ naghị ekwe nkwa ma ọ bụ kwenye na faịlụ dị maka nbudata na weebụsaịtị anyị agaghị enwe ọrịa na nje ma ọ bụ nje, ikpuru, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ koodu ndị ọzọ na-egosipụta mmetọ ma ọ bụ mbibi. Are na-ahụ maka mmejuputa usoro na ntụle zuru ezu iji mejuo ihe ị chọrọ maka izi ezi nke ntinye data na mmepụta, yana maka ịchekwa ụzọ dị na mpụga weebụsaịtị anyị maka nwughari nke data ọ bụla furu efu.
AS NA-EKWU NA-ANAKWETA ỌRT ANDB RR FOR NA RTIS FORT FOR FOR B FOR N'YOURLỌ NCHE NA INTANET ANYBS Weebụsaịtị na-enye anyị weebụsaịtị na dị ka ozi “dị ka” na-adịghị eme ka ọ bụla ngosipụta ma ọ bụ enyo, ma ọ bụrụ na nnọchite ma ọ bụ ngosipụta IHE (NA-enweghị ikike ikikere nke nwere ikike. N'ihe gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ọ bụla ozi ma ọ bụ ọrụ a na-enye site na ọrụ ma ọ bụ na ntanetị n'ozuzu ya, NA weebụsaịtị anyị agaghị abụ iwu maka ego ọ bụla ma ọ bụ ihe nbibi na-ebili. Ọ B SOL Ọ B YOUR ỌR YOUR TOBALR TO TOB THETA EZIOKWU, IZU NA USB USR OF NILE EGO, Ndụmọdụ, Ọrụ, ahịa na ozi ndị ọzọ enyere site na ọrụ ma ọ bụ na ntanetị zuru ụwa ọnụ. ANYBS NA-EME AKW WARKWỌ NA A GA-EBU EKWU ORLỌ Ọrụ ma ọ bụ na-enweghị mmejọ ma ọ bụ na a ga-edozi ya.
Ghọtakwara n'ihu na ọdịdị dị ọcha nke ntanetị nwere ihe ndị a na-ejighị n'aka na ụfọdụ n'ime ha na-enwe mmekọahụ ma ọ bụ nwere ike imejọ gị. AC nweta ego ndị a bụ ihe ize ndụ gị. ANYBS Weebụsaịtị enweghị ikike ịchịkwa NA-anabata nnabata ọ bụla maka ihe ndị dị otú ahụ I nwere ike n'ụzọ ụfọdụ nweta.
Ọdịnaya nwere ike ịnwe mmejọ ma ọ bụ mperi ndenye ederede. Ebe nrụọrụ weebụ My Traffic Blog na-enweghị ndị nnọchite anya maka izi ezi, ntụkwasị obi, izu ezu, ma ọ bụ oge nke ọdịnaya ma ọ bụ maka nsonaazụ a ga-enweta site na iji weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ọdịnaya dị na ya. Ojiji nke weebụsaịtị anyị na ọdịnaya dị na nsogbu gị. A na-eme mgbanwe na oge ọ bụla na weebụsaịtị anyị, enwere ike ịme n'oge ọ bụla.
ANYBS NA-EME AKW WARKWỌ NA ND THAT NA-EME NA-EME EGO NA-ECHICHE MA Ọ B THAT NA ANYUR NA ANDLỌ NA-EZI NA-AH FREEGH FREE COMLỌ NT COMTA NA IWU ỌR OTHER NA ỌZỌ. Ọ B IFR US NA ANY YOUR NA-EJI WEB WER OR ANY THE MA Ọ B THE THEB CONR CON NA-EME IHE THEB SR OR ORB ORR OR MA Ọ B RE INGBPLR E AKW ORKWỌ MA Ọ B D data, ANY WE B WE RBBSRUR NA-AH RGH WE FORLỌ AHOSE.
Gwa onye na-akpata ọghọm dị na ya
N'AGBANYEGH WILL ANY WILL, MMADPL NA-EME YA, MA Ọ B AN ỌZỌ KWESDRIR KWES MR M KWES ATR AT NA ANYBS NA-AKW BEKWỌ N'(LỌ NCHE A B FOR N'(LỌ NCHE A (M) Ọ B INLA, ỌZỌ, NA-AHND MA Ọ B OTHER ỌB OTHERR OTHER ỌZỌ (GCKWU, MA Ọ B ,GHIM TOB TOR,, AMBAMR FOR FORBỌROS, OSL OR mmemme ma ọ bụ ozi, na-ebili site na iji ma ọ bụ enweghị ike iji ọrụ, ma ọ bụ ozi ọ bụla, ma ọ bụ ntụgharị nke a na-enye na ọrụ, ma ọ bụ na-ebudata site na ọrụ, ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla nke ụdị ihe a. Ọ B IFR IF na ANY O WEBITE MA Ọ B I ND RE NA-anọchite anya ikike ka a dụrụ aro maka ụdị mbibi ndị a, ma ọ bụ (II) Ọ B CRLA NA-AKA NA-ECHI NJỌ, NT ,R,, MA Ọ B OTHER ỌZỌ NA-EGO NA DOWNLOADBỌR AND NA / IHE.
N'IHI NA STFỌD ST DOM DO NA-EKWUP THEGH OR IKPỌ MA Ọ B OR OFB OFR OF LBIR FOR N'ỌNW FOR Ọ B OR ỌB ORRC MA Ọ B IN ỌBCRC NA-EME, IMBIMR AB OVBOVROV LAGH NOT EME G YOU. N'Obodo ndị dị otú ahụ, ikike dị na njedebe nke iwu kwadoro, na-adabere na obere ego a na-akwụ maka ikikere nkwenye maka ụlọ ọrụ anyị niile na ebe a na-edebe akwụkwọ maka ebe a na-ekwu. Nke a bụ ebe ọ bụla na ọgwụgwọ ndị ọzọ dị.
Njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere njikọ nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Anyị My Traffic Blog mkpokọta na-eme ka ọ bụla na-anọchite anya bụla banyere ihe ọ bụla ọzọ website nke ị nwere ike ịnweta site na nke a ma ọ bụ nke nwere ike ejikọta a website. Mgbe ị nwetara weebụsaịtị na weebụsaịtị anyị, biko ghọta na ọ dabere na weebụsaịtị anyị, yana weebụsaịtị anyị enweghị ike ịchịkwa ọdịnaya dị na weebụsaịtị ahụ. A na-enye njikọ ndị a naanị ka ọ bụrụ ihe ga-adịrị gị mma ma ọ bụghị dị ka nkwado site na weebụsaịtị anyị nke ọdịnaya dị na Weebụ ndị ọzọ dị otú ahụ. Weebụsaịtị anyị anaghị ahụ maka ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị ọzọ metụtara yana anaghị eme nnọchite ọ bụla gbasara ọdịnaya ma ọ bụ izi ezi nke ihe dị na Weebụsaịtị ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ikpebie ịbanye na Weebụsaịtị ndị ọzọ jikọrọ, ị na-eme nke a n’onwe gị. Anyị anaghị akwado, kwadoro, na-atụ aro ma ọ bụ na-enweghị ike ịmegharị ma ọ bụ mee ngwa ngwa ọ bụla gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla enyere. Ikwesiri iche na anyị na-akwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe ọ bụla. Ọzọ, ihe ọ bụla ị na-ekwu na-akpata bụ nke a ga-ewere dị ka nsonaazụ gbara gharịị ma ị na-ewere ihe egwu nke nsonaazụ dị ala karịa, gụnyere ọghọm, nke anyị na-enweghị ibu ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ.
Dị ka onye ọrụ nke weebụsaịtị My Traffic Blog, ị na-ahụ maka nkwukọrịta nke gị ma na-ahụ maka nsonaazụ nke mgbasa ozi ha. Ikwesighi ime ihe ndi a: biputere ihe ndi nwebiisinka, belụsọ ma inwere onye nwebiisinka ahụ ma obu nwe ikike nke onye nwebisiinka ka ọ biputere ya; biputere ihe n'egosiputa ihe ahia, ma oburu na inwere ha ma obu nwe ikike nke onye nwe ya; biputere ihe emetọ ikike ikike ọgụgụ isi ọ bụla nke ndị ọzọ ma ọ bụ ikike nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi nke ndị ọzọ; tinye ihe omume rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, nkwulu, iyi egwu, iyi egwu, mkparị, ịkpọasị, ma ọ bụ ihe ihere nye onye ọrụ ọzọ na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla; biputere onyonyo putara ihe; biputere mgbasa ozi ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ banyere azụmahịa; leta leta ma ọ bụ atụmatụ pyramid; ma ọ bụ ersonomie onye ọzọ.
Ebe nrụọrụ weebụ anyị anaghị anọchite anya ma ọ bụ na-ekwe nkwa eziokwu, izi ezi, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke nkwukọrịta ọ bụla nke ndị ọrụ ndị ọzọ wepụtara na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ na-akwado echiche ọ bụla ndị ọrụ webụsaịtị anyị kwupụtara. Kwenyere na ịdabere na ihe ndị ọzọ ọrụ nke weebụsaịtị anyị bipụtara ga-etinye onwe gị n'ihe ize ndụ.
Anyị My Traffic Blog na ebe nrụọrụ weebụ adịchaghị enyocha nkwukọrịta n'ọdịnihu ma ọ bụghị maka nyocha ma ọ bụ nlekota ihe ezigara ndị ọrụ nke weebụsaịtị anyị. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ anyị na / ma ọ bụ onye ọrụ nkwukọrịta gosipụtara nke ekwuputara na ọ dabataghị nkwekọrịta a, weebụsaịtị anyị nwere ike nyochaa ebubo ahụ wee jiri ezi okwukwe na uche ya naanị iji wepu ma ọ bụ rịọ mwepụ nke nkwukọrịta. Weebụsaịtị anyị enweghị ibu ọrụ ma ọ bụ ibu ọrụ nye ndị ọrụ nke weebụsaịtị anyị maka arụmọrụ ma ọ bụ arụmọrụghị ụdị ọrụ ahụ. Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ikike ịchụpụ ndị ọrụ nke weebụsaịtị anyị ma gbochie ha ịbanye na weebụsaịtị anyị maka imebi nkwekọrịta a ma ọ bụ iwu ọ bụla ma ọ bụ ụkpụrụ ọ bụla, ma nwekwaa ikike iwepu nkwukọrịta nke mkparị, iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ na-akpaghasị.
Mediadọ aka na ntị gbasara ọha mmadụ (Divulgence of Personal & Private Information)
Social media enyela ikpo okwu maka ndị na-ahụ maka ịntanetị ịkọwa ọtụtụ ozi nkeonwe gbasara onwe ha, n'ụzọ nke yiri ka ọ dị njọ, ma ọ bụrụ na ezighi ezi na atụ anya ya. Agbanyeghị, ihe karịrị mmadụ ole na ole ebiela ndụ ịkwa ụta maka ozi nkeonwe nke ha ma ọ bụ ndị ọzọ kesara. Nke a bụ eziokwu kemgbe email dị mfe. Ọ bụ eziokwu nke weebụsaịtị na ngwa maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na weebụsaịtị ọ bụla, gụnyere nke a. A dọrọ gị aka ná ntị ka ị ghara ikpughe echiche gị.
3. Ibelata onwe onye.
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ, chebe ma jide webụsaịtị m na - enweghị ihe ọ bụla, ndị otu ya, ndị isi ya, ndị isi ya, ndị ọrụ ya, ndị ọrụ, ndị na - enye akwụkwọ ikike, ndị na - eweta ya na ndị na - eweta ozi nke atọ na weebụsaịtị anyị site na imegide mfu niile, mmefu, mmebi na ụgwọ, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, sitere na iji weebụsaịtị anyị ma ọ bụ mmebi nke Agreement a (gụnyere omume nleghara anya ma ọ bụ omume ọjọọ) nke gị ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-enweta na weebụsaịtị anyị.
4. Onye Ọ bụla nwere ikike.
Ndokwa nke paragraf nke 2 (Ojiji nke Ọrụ ahụ), na 3 (Indemnification) bụ maka abamuru nke weebụsaịtị anyị na ndị nwe ya, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị ọrụ, ndị ọrụ, ndị nyere ikikere, ndị na-eweta ọrụ, yana ndị na-eweta ozi nke atọ na Ọrụ ahụ. Onye ọ bụla n’ime ndị a ma ọ bụ ụlọ ọrụ a ga-enwe ikike ikwupụta ma mezuo iwu ndị ahụ megidere gị ozugbo n’aha ha.
Anyị na-edobe ikike inyocha mkpesa ma ọ bụ mkpesa nke Usoro Ọrụ yana Ọnọdụ ojiji ma mee ihe ọ bụla anyị chere na o kwesịrị, gụnyere mana enweghị oke na ịkọtara ndị ọrụ mmanye iwu, ndị na-achịkwa iwu, ma ọ bụ ndị ọzọ na -eche maka ọrụ iwu akwadoghị. ịkọwapụta data ọ bụla dị mkpa ma ọ bụ kwesịrị ekwesị maka ndị dị otú ahụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ metụtara profaịlụ gị, adreesị email, akụkọ ihe mere eme, adreesị IP na data okporo ụzọ.
Agreement a, n'ozuzu ma ọ bụ na akụkụ, nwere ike ịkwụsị site na My Traffic Blog na-enweghị ọkwa n'oge ọ bụla maka ihe ọ bụla. Ntinye nke paragraf nke 1 (Nwebisiinka, ikikere na ntinye echiche), 2 (Ojiji nke Ọrụ ahụ), 3 (Indemnification), 4 (Ikike nke Atọ nke Atọ), 6 (iringgba Onye Ọkachamara / Ọ nweghị Onye Ọkachamara-Ndị Ọkachamara), na 7 ( Iche iche) ga - alanarị nkwụsị ọ bụla nke nkwekọrịta a, n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ.
6.Hiring Onye Ndụmọdụ Ndụmọdụ, Attorney, ma ọ bụ Medical ma ọ bụ Ọkachamara Ndị Ọzọ / Enweghị Mmekọrịta Onye Ọkachamara na Ndị Ọkachamara ma ọ bụ ikike Ike.
Chohọrọ onye ọka iwu, dọkịta, ma ọ bụ onye na-enye ndụmọdụ maka itinye ego bụ ihe dị mkpa ma ekwesighi ịdabere naanị na data dị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ na mgbasa ozi.
Iwu na-agbanwe mgbe niile yana data nwere ike ọgaghị ezu ma ọ bụ zie ezie dabere n'okwu ikpe gị. Okwu iwu ọ bụla dabere na eziokwu ya n'otu n'otu na ikike dị iche iche nwere iwu na ụkpụrụ dị iche iche. Nke a bụ ihe mere ị ga-eji jiri nlezianya tụlee itinye ọrụ ikikere, ndụmọdụ ọkachamara na ikike gị.
Okwu ahụike dị mgbagwoju anya, ọ nwere ike ịmalite mgbe ụfọdụ site na ihe ndị metụtara ahụike na nke uche. Agaghị eji weebụsaịtị mee ihe dị ka isi iyi nke ịchọpụta ma ọ bụ na-agwọ nsogbu ahụike.
Okwu ego na-abụ mmadụ niile. Ndidi ize ndụ bụ naanị otu ihe ị ga-atụle tupu ịme ego ọ bụla ma ọ bụ mkpebi ego. Maka ndị a, na ndị ọzọ, ihe kpatara ya, ị kwesịrị ile anya na nduzi nke ọkachamara zụrụ azụ, ọ bụghị weebụsaịtị.
May nwere ike zitere anyị ozi-e, mana n’adịghị ọ bụla a ga-ewulite nkwukọrịta a n’ụzọ ọ bụla dịka ibido mmekọrịta onye ọka iwu, ma ọ bụ mmekọrịta ọkachamara ọzọ, yabụ kọntaktị ahụ ekwesịghị ịgụnye data nzuzo ma ọ bụ nke nwere mmetụta dị nhịahụ n’ihi na a gaghị akparịta ụka gị dịka nwere ikike ma ọ bụ nzuzo.
A ga-emeso Agreement a dịka a ga-egbu ya, tinye ya n'ike, ma rụọ ya na Steeti California. N'ihi ya, a ga-achịkwa ya ma kọwaa ya dịka iwu nke California si dị na ndị metụtara nkwekọrịta, na-enweghị nsogbu nke ụkpụrụ iwu.
Ihe obula nke g’eme site n’aka nke webusaiti My Traffic Blog gha agha ibido n’ime otu (1) afo mgbe ihe kpatara ya bilitere ma obu ghapu iwepuga ya. Omume niile ga-edo onwe ya n'okpuru oke erubere na Usoro ọrụ na Ọnọdụ iji ya. Nkwupụta iwu ọ bụla na-esite ma ọ bụ metụtara Usoro Ọrụ na Ọnọdụ Ojiji ma ọ bụ weebụsaịtị anyị, ewezuga ịda iwu ikike ọgụgụ isi na nkwupụta ndị ọzọ anyị na-ekwu, ga-edozi na nzuzo site na mkpezi ikpe mkpezi site na iwu American Arbitration Association azụmahịa ikpe mkpezi. A ga-ekpezi ikpe ahụ na California. Otu ọ bụla ga-eburu ọkara nke ego iji kwụọ ụgwọ na akwụ ụgwọ a na-akwụ, otu ọ bụla ga-akwụ ụgwọ ọka iwu nke ya. Ihe niile a na-ekwu ga-abụ onye a ga-ekpebi n’otu n’otu, a gaghị eme ka ọ kwadoo ya na ikpe ọ bụla ma ọ bụ mgbagha ọ bụla nke ndị ọzọ.
Abughi uzo omume di n’etiti ndi ozo ma obu omume ahia emeghariri imezi onodu a.
Weebụsaịtị anyị nwere ike ikenye ndị ọzọ ikike ya na ọrụ dị n'okpuru nkwekọrịta a n'oge ọ bụla n'amaghị gị.
Asụsụ dị na Usoro Ọrụ na Ọnọdụ ojiji a ga-atụgharịrị ka ọ dị mma ọ pụtara ma ọ bụghị n'ụzọ megidere ma ọ bụ megide otu ọ bụla. Iwu iwu ọ bụla maka mmetụta na ekwesiri idozi ihe ekwesighi imebi iwu megide ndị na-edepụta akwụkwọ (yabụ - "contra prefereum") agaghị etinye aka na ịkọwa Usoro ọrụ na Ọnọdụ iji ya, dịka a ga-akọwa Agreement ahụ dịka ndị na- ndị ọzọ dere.
Ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla n'ime Usoro ọrụ ndị a na ọnọdụ ojiji a ga-ejigide na-adịghị mma ma ọ bụ na-agaghị agbagha, a ga-ewu akụkụ ahụ ruo na o kwere omume dabere na ọdabara yana nrụrụ aka ga-emetụta akụkụ ndị ọzọ, ka ha wee nọgide na ike na nsonaazụ.
Nkwekọrịta a na-enwe Mmeri
Ruo ókè ihe ọ bụla dị na ma ọ bụ jikọtara na weebụsaịtị anyị na-emegide ma ọ bụ na ekwekọghị n'ozi Ọrụ yana Ọnọdụ ojiji, Usoro Ojiji a na Ọnọdụ ojiji ga-eburu ụzọ.
Agaghị emebi iwu nke usoro ọrụ ndị a yana Ọnọdụ ojiji a ka ọpụpụ nke ihe enyere ma ọ bụ ikike iji mmanye ya.
Ikike anyị dị n'okpuru Usoro ọrụ na ọnọdụ ojiji ndị a ga-adịgide nkwụsị ọ bụla nkwekọrịta a.
Ikike ọ bụla ekwuputaghi ozugbo ebe a ka edebere na Blog okporo ụzọ m.